HMF : Tsy hitondra fitoniana eto amin’ny firenena ny fanalana kandidà – MyDago.com aime Madagascar
HMF : Tsy hitondra fitoniana eto amin’ny firenena ny fanalana kandidà
Nitafa tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny Hotely Fanantenana Ampandrana io atoandro io ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana (HMF).Nitarika izany ireo mpitandrina ao anatin’ny HMF. Ny fomba fahitan’izy ireo ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny no nisongadina tamin’izany.Nambaran’izy ireo fa manery hiteny sy hiasa ny zavamanjo ny vahoaka Malagasy, maro an’isa manoloana ireo vitsy an’isa mihazona ny fahefana sy fitaovam-piadiana ka manao izay danin’ny kibony amin’ny familiviliana ny fiainam-pirenena ho amin’ny tombontsoan’izy ireo ka tsy azo ekena intsony izao. Ampy izay hoy izy ireo ny fifanomezan-tsiny sy ny fifampiandaniana lava reny tsy mitondra vokatsoa, sy ny fanilihana ny andraikitra amin’ny hafa tsy manana andraikitrika akory, ary ny fitanisana fahoriana sy ny teniteny foana mivadika ho fankahalana lalim-paka nefa tsy nanetsika akory ny ankihikely amin’ny fahefana tsy nomena azy afa tsy tamin’ny rangom-pohin’olombintsy tsy mahasolo tena na iza na iza.
Fikasana hanala kandidà
Manolona ny fikasana hanery olom-pirenena tsy handray anjara amin’ny fifidianana dia ambaranay hoy ny HMF fa tsy hitondra fitoniana eto amin’ny firenena izany fa mainka hihady lavaka kokoa, hisian’ny fifankahalana sy ny lonilony ahiana hanimba ny firenena ka tsy ho azo raofina intsony. Lazainay am-pahatsorana hoy izy ireo fa ny fihetsika tsy voatandrina kely fotsiny heverin’ny olona sasany hahatongavana amin’izany dia mainka hiteraka tsy fitoniana lalim-paka sy olana sarobahana indray. Raha tena tiana ny hisian’ny fitoniana hoy HFM dia ilaina fahatsora-po fa tsy hampiasana hery lava izao izay ambaranay fa misy farany ary ny hery tsymahaleo ny fanahy sy ny fahendrena Malagasy fa ny akanga maro tsy vakin’amboa.
Mila hajaina ny fahaleovantenam-pirenena hoy izy ireo fa tsy hanaraka ambokony hatrany izay lazain’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena na dia hoe mila ny fiaraha miasa amin’izy ireo aza isika. Ho an’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia taominay ny vahoaka Malagasy rehetra hanaja fatratra azy ireo fa tena fahendrena Malagasy ny manaja vahiny. Taominay ihany koa ianareo hoy ny HMF hanaja ny soatoavina dia ny fanajana ny ray amandreny fa tsy hiteny zavatra tafahoatra miteraka fanafintohinana toy ilay rano raraka tsy azo raofina iny. Miantso anareo ihany koa izahay hoy izy ireo hanaja ny fiandrianam-pirenenay ary hamakafaka tsara ireo tatitra tonga any aminareo ka tsy hanao fanapahankevitra hiteraka korontana sy savorovoro toy izao na dia hoe tena ilainay aza ny fanampianareo. Nandritra izay nandraisanareo andraikitrika izay dia tsorina fa olon-kafa no niady saingy olon-kafa no nampihavanina ary io no mampandamoka izay rehtra natao, manampy trotraka izany ireo rafitra rehetra natsangana dia tsy mahazo ny fon’ny vahoaka maro an’isa sady tsy azo antoka ny tsy fiandaniany, izay tsy ahilika amin’ny CES irery. Fanontaniana no apatrakay hoy ny HMF hoe : azo antoka ho tsy miandany ve ireo rafitra rehetra napetraka raha ireo naka fanjakana tamin-kery tamin’ny 2009 no maro an’isa ao na koa mametraka azy ireo(filoham-pirenena, governemanta, Cst , Ct, Ceni-T,Cmdn, Scs, FFM, CES,..) Azo antoka ho tsy miandany ve ny fikambanana iraisam-pirenena raha misy miaramila vahiny manohy hatrany ny fiarahamiasa amin’ny tafikay ao anatin’izao korontana izao. Ny fanatanterahana ny « esprit » n’ny tondrozotra nambaranareo dia mankany amin’ny fitoniana ka amoahana ny gadra politika, hanokafana ny radio nakatona, fampodiana ny sesi-tany fa tsy fanilihana kandidà akory.
Ny vaha olana hoy HMF dia mila hampihavanina ireo niady teto ary tsy rafitra sadasada tsy eken’ny maro no hanao izany, izay azo antoka fa hirona amin’ny fampian-kery indray, hanery ireo kandidà sasany hiala an-daharana, sanatria fa eo amin’izao vanimpotoana izao indrindra no iantsoana indray ny ray amandreny FFKM hanohy ny fandraisana andraikitra efanatombony haingana dia haingana fa mila vonjy maika ny firenena. Mba hampizotra tsara ny asa fampihavanana dia ilaina ny fitoniana koa aoka hitana ny teniny ny mpitandro filaminana ka tsy hiandany na amin’iza na amin’iza ary tsy am-bava fa amin’ny fihetsika rehetra ataon’izy ireo no hanehoany izany. Isika vahoaka aoka ho tony mandrakariva ary handray andraikitra avy hatrany rehefa ilain’ny firenena izany fa isika no hery farany ianteheran’ny firenena.
LALAO RAVALOMANANA : HITONDRA FITAHIANA HO AN’NY FIRENENA
Hangataka fihaonana amin’ ny kandidà Ratrema William
Auteur Solo Razafy*Publié le 3 juin 2013 4 juin 2013 Catégories Politique
2 pensées sur “HMF : Tsy hitondra fitoniana eto amin’ny firenena ny fanalana kandidà”
4 juin 2013 à 4 h 08 min
I Risara Baomba, nisy vanim-potoam-pivavahana iray nokarakarainareo,
tonga nanatrika izany nijoro teny anoloana
mandrak’ankehitriny anefa JEREO ity izy: lacry no nanaparitahany ny mpitazana ny nanjo an’i Lahiniriko!
Misaotra anareo eran’ny fo sy saina foana,
fa raha tsy nitsangana ianareo tamin’ireny vono-olona sy fanenjehana ary fanaporetana tetsy sy teroa ireny: nanakana nanisy fetra, eny namoy ny iray taminareo aza dia … asa nitombo firy ny tany @ CIMETIERE fosse commune!!
« … manery hiteny sy hiasa ny zavamanjo ny vahoaka Malagasy, maro an’isa manoloana ireo vitsy an’isa mihazona ny fahefana sy fitaovam-piadiana ka manao izay danin’ny kibony amin’ny familiviliana ny fiainam-pirenena… »
Fahotàna ny mamela ny ratsy hisoka sy hahazo vahana – ny ratsy eto dia izay tsy mifanaraka @ zo maha-olona, ireo fihetsika manao fanahim-biby rehetra, …
Na ny « non-assistance aux personnes en danger » (teny baikon-dry zareo io) dia henjehin’ny lalàna velona etsy sy eroa!!!
4 juin 2013 à 8 h 34 min
TSY AZO TERENA HIAVANA NY OLONA RY ZAREO Â !!!
Fanajàn’ny rehetra Lalàna no zavatra tsy maintsy takiana voalohany indrindra rahatoa ka tena vahaolana no tadiavinareo !
Pas de Jusitce -> Pas d’Apaisement
Pas d’Apaisement -> Aucune Réconciliation à espérer !!!
Maninona no tsy sahy manantona ny CI ianareo, milaza amin-dry zareo hoe mpisoloky ireo mitonona ho CRM sy CSC ireo ????
Raha ny CSC fotsiny no raisiko. Nanara-maso marina ny fampiarana ny Tondrozotra ve ry zareo, ary nitaky tamin’ny fomba « entitra » ny tokony hampiaran’azy ???
Be vava ery mantsy ry zareo CSC sy CRM, ary efa nilaza fa afaka mandray « mesures draconiennes » rahatoa ka…..!!
Rehefa hita fa tsy nanaraka ny tondrozotra ny foza, naninona no tsy naka an’izany « mesures » izany ?
Izao naka mesures, fa « mesures draculéennes » !
Hitohy ny krizy, ary hitohy arak’izany ny fahazoana vola mora !! Iza avy ireo mbola manantena ny hihinam-be ???
Tsy mahagaga rahatoa ka Temple du rugby no nahamaika an’ilay BDN ! Spécialiste amin’ny fampim-pasiana baolina lavava ramalagasy !
Atsipy etsy ary avy eo atsipy eroa, dia izao indray any amin’ny CES ny baolina. Dia avy eo, iza indray no handray ny baolina mafàna ???
Précédent Article précédent : Transaction douteuse
Suivant Article suivant : ANKOLAFY RAVALOMANANA : Hajao ny lalàna velona